Antso hifanome tanana - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Antso ho amin’ny fifanomezan-tanana avy amin’ny Fivondronamben’ny Eveka eto Madagasikara
Iarahantsika nahalala sy nandre ny zava-niseho mampalahelo teto amin’ny firenentsika tato ho ato dia ny voina nahazo ireo havantsika any amin’ny commune Antsakabary, faritra Sofia, ao anatin’ny diosezin’Ambanja. An’arivony mahery ireo havantsika niharan’ny herisetra ka tra-boina tsy fidiny, tsy manan-kohanina, tsy manan-kotafiana, tsy manan-kialofana ary voatohintohina hatramin’ny asa fivelomana sy ny fianarana.
- Maneho fiaraha-miory amin’ireo namoy havana sy ireo tra-boina rehetra izahay Birao sy ny Fivondronamben’ny Evekan’i Madagasika ary ny Fiangonana Katolika manontolo.
- Manameloka ny vonoan’ olona sy ny herisetra ary ny valifaty na inona na inona antony.
- Ary manao antso avo ho amin’ny fampihavanana sy ny fifamelan-keloka ary ny fandraisana andraikitra manoloana ny tsy fandriam-pahalemana sy ny firongatry ny hatezeram-bahoaka mahazo vahana etsy sy aroa. Efa naverimberinay tamin’ny hafatra nataonay io antso ho amin’ny fandraisana andraikitra io.
- Maneho fisaorana manokana sy mankahery an’ireo pretra sy relijiozy ary lahika any amin’ny faritra nisehoan’ny voina, eo ambany fitarihan’i Mgr Rosario VELLA, Evekan’ny diosezin’Ambanja, tamin’ny fijoroana ho vavolombelon’ny marina sy ny fanentanana amin’ny fifanampiana ary ny fandraisana andraikitra avy hatrany hatramin’ny nitrangan’ny loza.
- Maneho fisaorana an’ireo rehetra tsara sitra-po izay efa naneho fiaraha-mientana sahady satria tokoa ny voinkava-mahatratra.
Manoloana ny zava-misy ankehitriny dia tsy hainay ny hangina tsy hampahatsiahy sy hampita hafatra :
- Ary ny isaky ny Diosezy kosa no hiangaviana handefa mivantana any amin’ny mpiandraikitra ny diosezin’Ambanja na aty amin’ny Foiben’ny Caritas Nasionaly Antananarivo (jereo ny adiresy any amin’ny farany) ary izy ireo no hiangaviana handefa izay voaangona any amin’ny diosezin’Ambanja, amin’ireto toerana telo ireto: